Iimpawu zeShishini leNtaba yeApple
Kutheni ikhompyutha yakho elandelayo yeshishini kufuneka ibe yiMac
NgoMgqibelo, Agasti 25, 2012 NgeCawa, Agasti 26, 2012 Douglas Karr
Ndibe ngumfana othanda ukusukela umhlobo wam uBill endithengele iApple TV. Ngaphambi kokuba uyazi, ndinekhaya eligcwele iiMacs kwaye ishishini lam ngoku liMacs zonke. Ukuza kwihlabathi lePC, kuye kwakho imiceli mngeni. Imizekelo emibini ephezulu kwentloko yam… akukho macros kwiOfisi, akukho Microsoft Access. Olu luluhlu oluncinci, nangona kunjalo. Izibonelelo zeMac zijike zibe nkulu kakhulu kunezinto ezingathandekiyo ngokuba yiMac kwilizwe lePC.
Ngezixhobo zakutshanje kunye nesoftware, uApple uqhubele ekhaya ezinye zezinto ezintle ezimangalisayo kulo naliphi na ishishini.
Iyokuqala AirPlay. Kunye Apple TV I $ 99 kunye nayo nayiphi na iTV ebanzi, iofisi yakho ngoku inendawo yokubonisa ngaphandle komthungo kwiilaptop yakho. Ngotshintsho lwamva nje lwe-OSX, iNtaba yeNtaba yongeza iqhosha lokudlala kwi-bar yemenyu. Cofa kuyo kwaye isikrini sakho siyaboniswa. Unokudlala ividiyo kunye nesandi!
AirDrop ilandelayo… yinxalenye yeNtaba yeNgonyama Ukwabelana okwakhelweyo. Umxhasi wethu, Ibhokisi yeTinder, weza ukuhlela ezinye iifayile. Endaweni yokuthumela i-imeyile okanye ukubeka kwifolda ekwabelwana ngayo yelifu… I-AirDrop yamvumela ukuba athumele ifayile ngqo kwi-Mac yam. Uluhlu lweAirDrop zonke iiMac ezikufutshane kwaye zikuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane iifayile (ngemvume). Umsebenzi omangalisayo!
ixesha Machine yeyona nkqubo ilula yogcino eyakha yakho. Beka ifayile ye- Ixesha leCapsule kwinethiwekhi yakho okanye yabelana ngokuqhuba kwenye indawo… kwaye unendawo yogcino yeMatshini yeXesha engenzixhakaxhaka kwi-Mac yakho.
I-Apple ibisoloko inezixhobo ezikhulu zokukunceda ufuduke ukusuka kwi-Mac ukuya kwenye, kodwa Umncedisi wokufuduka ilula kwaye iyamangalisa! Kutshanje ndithenge iMacBook Pro entsha kwaye ndifuna ukufumana zonke iiapps kunye neefayile ezingaphezulu kwayo. Qhuqa ngeqhosha lokukhetha licinezelwe kwaye iwizard elula ikubuze ukuba uyafuna na ukuyibuyisa ukusuka kumatshini wexesha, faka kwakhona iNtaba yeLion entsha, okanye ukope iifayile zakho kunye neeapps kwenye iMac. Kwisithuba seyure ndandivukile ndibalekile!
Gcina ukhumbula ukuba akukho nanye kwezi zinto zenethiwekhi ezifuna umphathi wenethiwekhi kunye noqwalaselo olunzima. Njengazo zonke izinto eziveliswa yiApple, ziyasebenza nje.
Indima entsha yeGosa eliyiNtloko leTekhnoloji yeNtengiso
Ukufihla ukuBhalisa kwakho ayisiSicwangciso sokuGcina
Agasti 27, 2012 ngo-4: 55 PM
Kwaye xa "uhambe iMac", awunakubuyela umva! 😉
Agasti 29, 2012 kwi-11: 34 AM
I-Excel… esinye sezizathu zokuba itekhnoloji yentengiso kufuneka isebenzise iPC, hayi iMac.
I-Excel ibonakala ngathi ihamba kancinci kwii-Macs ezindala, kodwa iyavutha kwi-MacBook Pro yam entsha. Ukungancedi kukuba i-VBA kunye neMacros azibaleki kwi-Mac (ngaphandle kokuba uyiqhuba kwiWindows… enokwenzeka, kodwa yoyise injongo yokuba neMac!).
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Prochef1
Sep 2, 2012 kwi-5: 14 AM
I-Excel isebenza kwi-Mac kunye neNombolo (iMac version ye-excel). Iinombolo ze-WIth ungazithumela ngaphandle kwaye uhlelele kwiipredishithi ezibalaseleyo kwaye uzigcine zikwifomathi ebalaseleyo. Kulula!
Yinyani @ twitter-15194414: i-disqus, kodwa ngelishwa inguqulelo ye-Excel kwi-Mac ayibandakanyi i-VBA (iVisual Visual yeZicelo) okanye iiMacros… sisikhewu esikhulu ekusebenzeni!
Sep 13, 2012 kwi-5: 01 AM
Inkqubo yale mihla, ethandwayo yokusebenza kwekhompyuter ineenkqubo ze-spreadsheet ezihambelana ne-Excel ezikhoyo. Umhlaba omangalisayo ubambe umkhosi weentsuku ezintathu ukubhiyozela.
Kwezinye iindaba, isibhakabhaka siluhlaza okwesibhakabhaka, amanzi amanzi.
Ndinomthwalo we-Excel / ukuhlela / ukugcina ispredishithi esihambelanayo kwi-90s-spec PALM PILOT kunye ne-mid-noughties Symbian-based PHONE ngenxa yenceba.
Sep 13, 2012 kwi-4: 56 AM
Ehhh… masithi andiqinisekanga kangako apha.
I-Airdrop ivakala njengesihogo kakhulu njengeempawu zokwabelana ngefayile ezakhelweyo kwiMicrosoft Windows iminyaka engaphezulu kwamashumi amabini ngoku, kwaye esihlala siyisebenzisa kwiofisi yethu esekwe kwiWindows XP / 7. Ndinengxaki yokuyibona njenge-USP yeMac. Kwaye nokuba ayisekho, kunokuba kuhle ukuba wenze into efanayo nokuba une-10 yeebluetooth dongle exhunywe kwizibuko le-USB kwidesktop, kwaye eyakhelwe ngaphakathi (kwaye engafakwanga) amanqaku e-BT ngokusisiseko kuyo nayiphi na ilaptop yePC (Ngokuqinisekileyo, yinto endiyisebenzisileyo ukuthumela iifayile nokusuka kwifowuni eyayineBluetooth kodwa ukungadibani kakuhle kwe-USB, kuzo zombini iilaptops kunye neidesika ezixhotyiswe nge-dongle)… okanye kube lula nangoku, ukuntywila nge-sub- $ 10 USB imemori memory okanye ikhadi le-SD.
Idlalwe… Kulungile, akulunganga, kodwa usadinga ukubamba iApple TV kwaye idityaniswe. Kusenokwenzeka ukuba akunzima kangako ukwenza okufanayo nayo nayiphi na i-PC / i-laptop ye-junk endala edityaniswe kwigalelo le-HDTV ye-VGA kunye nenqaku lokwabelana ngeDesktop ekude (eyakhelwe kwiWindows ukusukela ubuncinci i-2K, ukuba ayisiyi-9x)… nakwi-ofisi bume ndinako ' Ndiyabona ukuba zininzi ii-HDTV malunga nokuba azinayo iPC yeshishini enesidima (okanye iMac enikezelweyo) edityanisiweyo, okanye umatshini weWindows owakhelweyo (kwimeko yeebhodi zemiqondiso yedijithali). Kukwakho nezixhobo zokubonisa ngaphandle kwamacingo ezifumanekayo kwiiPCs-enyanisweni, nasiphi na isixhobo esikhupha i-VGA, i-RGB okanye i-YCbCr uphawu lwe-hi-def yecandelo (kwaye kwezinye iimeko i-HDMI / DVI, okanye ukudityaniswa) nokuba luhlobo luni, inkqubo yokusebenza, abaqhubi okanye isoftware- hayi imali eninzi kakhulu. IiTV zikamabonwakude zale mihla zingenza into ecaleni kwale migca nge-ethernet (kwaye ke ngenxa yoko i-wifi) nayo, kodwa okwangoku andizukubeka mali kuyo…
Ixesha leCapsule… andifuni ukumba kulo nzima kakhulu, kodwa ihlala ivakala ingaphezulu kum. Ndithengile iidiski zangaphandle ezinamaxabiso aphantsi ngaphambi kokuba ziza nesoftware yogcino oluzenzekelayo, kwaye ndiyabheja ukuba ndithenge isixhobo esiqhelekileyo seNAS sinokwenza ngokufanayo. Iinguqulelo zale mihla zenethiwekhi zeewindows zinokucwangciswa ngokuzenzekelayo kugcino lweefayile zangaphambili kwi-backup server drive yezo "oops" amaxesha ngokufanayo njengoko zinokwenzeka nge-TC (enyanisweni… ungazikhupha iifayile ezizodwa kuyo? Ndinamava othe ngqo kuye kwanyanzeleka ukuba ubuyisele umva yonke ikhompyuter…) - kwakhona, ndisebenzise elo ziko kumatshini wam wasemsebenzini emva kwempazamo yokungakhathali, kwaye ibingenamthungo… cofa ekunene kwifolda ekuthethwa ngayo, yiya Ukuya kwi "iinguqulelo zangaphambili" isithuba, kwaye ubambe kude kube kufunyenwe enye enefayile elahlekileyo… emva koko khuphela le fayile kuhlobo lwangoku lwencwadi.
Umncedisi wokufuduka-Kulungile, unendawo apho. Ndingathanda ukuba iikhompyuter zam (njengoko zinjalo, ayisiyiyo eyona ntlungu inkulu yokuqhagamshela idrive yangaphandle, ikope inani elincinci lamaxwebhu kunye nezinye iifayile zedatha ezihlala kwidiski yangaphakathi ukuya entsha matshini (okanye nokuba uzilahle nje kwisitaki esincinci seeDVD), emva koko ufake kwakhona iinkqubo ezimbalwa endizisebenzisayo ngaphandle kwenani elikhulu ebelifakelwe ezantsi kwiminyaka emva koko ngokuthe ngcembe ndilibale ngayo). Kodwa oko kuya kuba kokufanelekileyo ngakumbi kumsebenzisi wasekhaya okanye umntu okwiofisi encinci kwaye engalungelelaniswanga kakuhle kunalo naluphi na uhlobo lweshishini elinobungakanani obunesidima kunye nenethiwekhi kunye neeseva, apho nayiphi na i-sysadmin exabisa ityuwa yayo iya kusebenza kunye nenkqubo yokusebenza yokuqhuba imifanekiso kunjalo.
Ngaba ngenene sisibonelelo sokuba ezi zinto zisuse umlawuli wenethiwekhi kunye naluphi na uhlobo lwendlela yokuziphatha okanye umbutho kwinethiwekhi yeofisi yakho? Isiphithiphithi solu hlobo sidla ngokukhokelela kubutofotofo, ukunqongophala kokukwazi ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukungazithembi kunye nokufakwa kwesicelo, ngaphandle kokufaka igalelo kuyo nayiphi na into kwimveliso.
I-Airdrop yahluke mpela kunefowulda / ukwabelana ngefayile kwi-PC. Oku kufuna ukuba kungabikho nethiwekhi… enye iMac ngaphakathi kuluhlu olungenazingcingo. Kuhle kakhulu! Nanini na xa ndenza ukwabelana ngefayile kunye nePC, kuye kwafuneka ndifumane umsebenzisi womnatha kwinethiwekhi kwaye ndongeze kwiqela labo ngaphambi kokuba ndibelane nantoni na.
Mar 13, 2013 ngo-12: 29 AM
ukulahleka kwenqaku lakho. Zisebenza nje ngokulula, hayi ukuseta, iphaneli yokulawula (ngaphandle kwemvume). I was a pc guy for 20 years and after being the sys admin at work and then coming home to be a sys admin for HW ekhaya, ndadinwa. Wachitha imali kwi-macs kwaye akazange ajonge ngasemva. Akusekho blues, pinks, abamhlophe okanye abamnyama. IiMac zisebenza ngokulula w / o nasiphi na isakhono solawulo esifunekayo. Emsebenzini sifumene ukhetho loku-odola iMac okanye iPC. Kwaye ndahamba nge-mac, kuba ndingasoloko ndiqhuba windows ngaphakathi kwe-VMware. Ii-PC ziyahamba kuba i-HW jsut ifuna ukusebenza i-w / o ine-BS kwi-CS.
Sep 24, 2012 kwi-3: 58 AM
Ewe, iiwindows zibaleka kwi-Mac zibaleka ngokukhawuleza, zitshisa kwaye zenza le nto uyifunayo ngcono kunePC. Ke unoko engqondweni kwaye yintoni iMac enokuyenza ngcono kunePC, kutheni ungabinazo zombini ihlabathi kumatshini ongcono. Ekugqibeleni uyakufumanisa ukuba usebenzisa isahlulo sePC ngokuncinci nangaphantsi.
Epreli 25, 2013 ngo-12: 17 AM
Idlalwe ayikho into enkulu nokuba. Ithebhulethi yam eneminyaka emi-5 ubudala ye-PC inokuhambisa zonke iifayile zam zeZiko leMedia kwi-4 yeminyaka ubudala iSony Network Player. Kwasa.
Meyi 12, 2013 kwi-12: 22 AM
Meyi 23, 2013 kwi-1: 37 AM
Oku kubonakala ngathi yenye 'fan boy' enkulu ukuya kuApple. Kodwa kukho izinto ezimbalwa ezingalunganga, umzekelo, iMac imfutshane kwiMacintosh, kodwa akusekho khompyuter yeMacintosh kwakhona. “IMac” yiPC, sisixhobo esifanayo kwityala eliqaqambileyo, kwaye ibiza amaxesha angama-4 kakhulu. Ndicinga ukuba umahluko ozama ukuwubonisa kukuba iMacOS (okt, iNkqubo yokuSebenza) ibhetele kuneWindows yokusetyenziswa kweshishini, ukanti uye wasilela ukubonisa naziphi na izizathu zokwenyani zokuba kutheni iMacOS ingcono kumsebenzisi weshishini.
1. I-AirPlay ifuna ukuba UTHENGA izixhobo ezingaphezulu, kwaye uninzi lweenkampani azinayo i-Apple TV, oko kuthetha ukuba ufumana i-AirBook okanye enye into emva koko awuyi kuba nakho ukwenza into oyenzayo nakwisiphi isikrini esikhulu xa Uhambela kude kwiTV yakho ezinikeleyo. Uninzi lweeprojektha ziyasilela ukubonisa isikrini sakho ngokufanelekileyo kwaye ziyeke kwiscreen esingu-1024 × 768 (okona kulungileyo, ihlala ingama-800 × 600 nangona), oku kunika ithuba lokujonga kakubi, kwaye kuyinto eqhelekileyo nakubani na owabelana nabanye nge-desktop yakhe- uza kulo naliphi na ishishini eline-Apple TV okwangoku.
Ukuba ubuzokwabelana ngewindows yakho, ezi projektha ziya kukuvumela ukuba usebenzise i-1280, 1440, 1600 okanye ngo-1920 ngaphandle kwengxaki- kutheni le nto izixhobo ezifanayo zisilela ukwenza oku, kuba usebenzisa iMacOS? Ndicinga ukuba umbuzo uyaziphendula.
2. I-AirDrop ngokusisiseko iyafana nokufunyanwa okuzenzekelayo ngaphakathi kwiWindows oko bekukho ukusukela kwi windows 2000. Nawuphi na umatshini kwinethiwekhi owabelana nantoni na esidlangalaleni uzakuvela kwindawo yakho ye "My Network Places", awunakufuneka uyenze Nantoni na ukufumana oku, iyasebenza nje! Ukuba ufuna ukuthumela into emntwini, tsala kwaye ulahle kwifolda, kodwa unokujonga iifayile zabo ngaxeshanye.
Ukuba bathe bazivalela ngaphandle iimvume (uninzi lwaBalawuli luyakukhubaza oku kumfanekiso wabo osisiseko), emva koko banokukunika imvume yokubhala kwifolda yabo yamaXwebhu kaRhulumente kwimizuzwana embalwa.
3. Umatshini wexesha uvakala njengokukrazulwa kweefestile ezisebenza ngokuzenzekelayo zeewindows (ukusukela ukuphumelela 2000). Kodwa iiwindows ziya kugcina iifayile zenkqubo kuphela, ukuba ufuna ukugcina iifayile zakho zobuqu, uya kuba nendlela yokwenza oku ngewindows server software apho umsebenzisi angazukufuna nokwazi ngayo-izakwenzeka nje .
Ukuba ufuna ukwenza ugcino lwedatha yobuqu nangona, ke kulula ukwenza le nto windows njengoko injalo kwiMacOS, maneka nje ukuqhuba kumatshini wakho, okanye kwi-NAS kwinethiwekhi yakho, kwaye baya kuza isoftware efanelekileyo yokwenza ukuba i-backups yakho iqhubeke… Kukwakho namakhulu amacebo oGcino lwamafu ngaphandle apho aphantsi kakhulu kwaye kulula nokusebenzisa.
4. Uncedo lokufuduka kwishishini yinkcitho yexesha, kuba i "Admin" yakho iya kufaka nje umfanekiso kumatshini, kwaye zonke iifayile zakho zobuqu / zomsebenzi ziya kube sele zixhaswe kwenye indawo… Kwaye ziya kufumaneka kumsebenzisi wakho nokuba ungangena kuwuphi umatshini. IiWindows bezisebenzisa abasebenzisi abazulazulayo ukusukela ngewindows 95, ethi ivele ngokuzenzekelayo iphinde ibuye idatha kwinethiwekhi yakho. Izixhobo ezinjengebhegi emfutshane esetyenziselwa ukuvumela ukuba ugcine iifayile kwi-synch phakathi kweendlela ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kunye ne-intanethi, kwaye zazifumaneka kwiWindows 95!
Meyi 23, 2013 kwi-10: 20 AM
Kubonakala ngathi “yinkwenkwe engengomlandeli” awuzisebenzisanga ezi zinto, @ facebook-100000630323259: disqus. 🙂
1. Ndithe ifuna i-99 yeedola, kodwa wenze intetho yam. Kutheni le nto ishishini liza kuchitha amawaka kwiprojektha endaweni yokufaka nje i-HDTV entle kunye neAppleTV? Kungenxa yoko le nto ndincoma.
2. Hayi, Ndiyoyika akukho apho kufutshane. Akukho sidingo sokuseta iimvume, ubekhona kwinethiwekhi efanayo yeWindows, njl.njl.I-AirDrop ivumela nayiphi na iMacs ekufutshane kwaye iqhagamshelwe kwinethiwekhi efanayo ukuba yabelane ngeefayile.
3. Kwakhona, ukuba ubuqhuba isoftware, uya kuwubona umohluko.
4. Ndisebenze inqwaba yamashishini kwaye sisibini kuphela esine-sync efanelekileyo kunye neefolda zenethiwekhi owabelana ngazo othetha ngazo. Kwakhona, oku kwenza iMac yam entsha ikopi ye-EXACT, ngelixa izixhobo zekhompyutha ziphuculwe phantsi kwayo.
Andithethi njengomfana ongenamava kuzo zombini. Ndinenkqubo ye-monster yeWindows ekhaya ene-XBox 360 yokonwabisa. Amava eWindows AKUFANANI. Iimpawu zeMac kunye ne-OSX zisebenza ngcono, ngokukhawuleza, kwaye kulula kuneWindows. Ndingumsebenzisi weWindows ngaphezulu kweshumi leminyaka. Ndiyoyika soze ndibuyele umva. Abahlobo bam ababedla ngokundingxolisa ngokuba "ngumfana othandayo" baye bafumanisa okufanayo.